ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ LIA International Co.,Ltd. (ခြေအိတ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်တင်တင်ပို တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ဗန်းမော်အတွင်းဝန်လမ်း၊ အမှတ်(၄၁)ရှိ Mr. Kim Hyeong Geun(အလုပ်ရှင်)၊ LIA International Co.,Ltd. (ခြေအိတ်စက်ရုံ) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်တင်တင်ပိုတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိ အဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိ ကောင်စီသို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဌ ဦးဖေအောင်ဝင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးသန်းမောင်နှင့် ဦးရဲကျော်သူတို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၃၁/၂၀၁၈) ဖြင့် ၃၁-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်.... (228)